Vaky trano teny Itaosy Tana-maron’ny tompon-trano no nahasamborana jiolahy
Nantsoin’ny tompon-trano ny mpitandro filaminana rehefa voasambotra ilay mpamaky trano mpidoroka rongony.
Lehilahy iray, 30 taona no nihanika tamboho, tamin’ny 2 ora maraina, omaly alarobia ary niakatra teny ambony “terrasse”. Taitra noho izany ny tompon-trano ka nijery ny zava-nisy ary nahita lehilahy iray tafiditra ao an-trano. Nosamborina izy ary nantsoina ny polisy. Vetivety ihany koa dia tonga ireto farany. Nahitana fonosana rongony miisa 3 teny aminy nandritra ny fisamborana, araka ny vaovao ofisialin’ny polisy. Mipetraka eny Ampefiloha Ambodirano izy io. Araka ny filazan’ny manodidina, mihanaka ny vaky trano eny amin’ny faritra Itaosy iny, indrindra amin’ny alina ao anaty torimaso toy izao. Matetika efa mody ihany koa ny andrimasom-pokonolona vao manatanteraka ny asa ratsiny ireo tontakely.